Lesona 5: Ireo tombokase fito
Hodinihina mandritra ny herinandro : Apôk.6:1-8; Mat.24:1-14; Apôk.6:9,10; 2Tes1:7-10.
Tsianjery : Hianao no mendrika haka ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny; fa voavono Hianao, ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny, sy ny olona ary ny firenena rehetra;
Catégorie : Lesona 5: Ireo tombokase fito
HITANTSIKA TAMIN' NY HERINANDRO LASA fa nandray ilay boky voapetaka tombokase i Jesôsy. Midika izany fa naveriny tamin'ny olombelona ny zavatra rehetra verin'i Adama raha nanota izy. Nahafahan'i Jesôsy nanokatra ny tombokase amin'ny boky ny fahafatesany ho antsika. Maneho ny fahavononany hamita ny drafi-pamonjena ny famahany ny tombokase voalohany. Maneho koa izany fa tsy maintsy manomboka mitory ny filazantsara ny mpianatr'i Kristy. Hitory ny filazantsara hatrany izy ireo mandra-pamahan'i Jesôsy ny tombokase fahafito farany. Hifarana ny tantaran'ny tany rehefa avy mamaha ny tombokase fahafito Izy.
Manampy antsika hahatakatra ny hevitr'ireo tombokase fito ireo ny Apôk. 3:21: "Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin'ny Raiko eo ambonin’ny seza fiandrianany." Maneho ny fandresena sy ny fahefana amin'ny fahotana omen'i Kristy antsika izany. Mitantara amintsika ny fandresen'i Kristy ny fahotana sy ny fanandratana Azy ho eo amin'ny seza fiandrianan'ny Rainy ny Apôk. 4 sy 5. Miresaka momba ireo vahoakan'Andriamanitra eo anoloan'ny seza fiandrianan'i Kristy rehefa avy nandresy ny fahotana sy ny fahavalon'Andriamanitra kosa ny andininy farany amin'ny toko faha-7. Ny toko faha-6 indray dia miresaka momba ny vahoakan'Andriamanitra mialoha ny handreseny. Voaresaka ao koa ny zavatra tsy maintsy horesen'izy ireo mba hahafahany miara-manjaka amin'i Kristy.
Mamaha ny tombokase voalohany i Jesôsy (Apok. 6:1-8)
Vakio ny Apok. 6:1-8, izay mitantara ny namahan'i Jesôsy ny tombokase voalohany, faharoa, fahatelo, ary fahefatra. Vakio indray ankehitriny izay nosoratan'i Mosesy ao amin'ny Lev. 26:21-26 sy izay nolazain'i Jesôsy ao amin'ny Mat. 24:1-14. Mariho ireo teny manan-danja itovian'ireo andalan-teny ireo. Inona no ampianarin'izany momba ny hevitr'ireo tombokase ao amin'ny Apokalipsy?
Raha tiantsika ho takatra ireo tombokase fito, dia ilaintsika aloha ny mahatakatra ireo ozona ao amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Isiraely ao amin'ny TT. Ireto avy ireo ozona voalaza tao amin'ilay fanekena, izay nampiharina raha toa ka nanao hadisoana ny Isiraely: bibidia, sabatra, areti-mandringana, ary mosary. Nampiasain'Andriamanitra ireo famaizana efatra ireo mba hanampiana ny olony hahatakatra fa tena mila Azy izy ireo. Tahaka izany koa, ampiasain'Andriamanitra ireo mpitaingin-tsoavaly efatra ao amin'ny Apôk. 6 mba hanampiana ny olony hifoha mandrakariva raha eo am-piandrasana ny fiverenan'i Jesôsy izy ireo.
Misy fitoviana maro koa eo amin'ireo tombokase efatra sy ny Mat. 24:4-14, izay nanazavan'i Jesôsy ny zavatra hitranga eto an-tany mialoha ny fiverenany. Ireo mpitaingin-tsoavaly efatra no fitaovana ampiasain'Andriamanitra mba hanampiana ny olony hahatsiaro fa tsy ity tany ity no fonenany.
Na dia ara-tandindona aza, dia hita fa momba ny ady koa ny Apôk. 6:1,2. Mihazona tsipika ary nomena satroboninahitra ilay mpitaingin-tsoavaly voalohany voalaza ao. "Stephanos" no voambolana grika entina ilazana io satroboninahitra io (Apôk. 6:2). Io no ilay satroboninahitra omen'Andriamanitra ny olony izay mandresy amin'ny ady atao amin'ny fahotana (Apôk. 2:10; Apôk. 3:11). Mpiady tsy mety resy io mpitaingin-tsoavaly ao amin'ny Apôk. 6:2 io, ka resiny avokoa ny fahavalony rehetra raha miroso eo amin'ny ady izy.
Maneho fotoana manokana teo amin'ny tantara izay nanombohan'ny vahoakan'Andriamanitra nitory voalohany indrindra ny filazantsara ny tombokase voalohany. Nanomboka tamin-kery tamin'ny Pentekôsta izany, ka tamin'izany no nanombohan'i Jesôsy nampiitatra ny fanjakany. Ankehitriny dia mbola misy toerana maro hobaboina sy olona maro itoriana ny filazantsara mialoha ny hiverenan'i Jesôsy .
Mifanaraka tsara amin'ny hafatrAndriamanitra ho an'ny fiangonana tany Efesosy sy izay nitranga tamin'izany fotoana izany ireo zavatra voasoritsoritra ao amin'ny tombokase voalohany. Naneho ny vanim-potoana izay nielezan'ny filazantsara haingana nanerana izao tontolo izao izany (Kol. 1:23).
Eo amin'ny antoko mandresy mandrakariva isika raha miandany amin'i Jesôsy eo amin'ny ady amin'ny ratsy. Nahoana no zava-dehibe ny mahatsiaro io fahamarinana io rehefa mihasarotra ny zava-misy?
Mamaha ny tombokase faharoa sy fahatelo i Jesôsy (Apok. 6:3,4)
Vakio ny Apôk. 6:3,4, izay manoritsoritra soavaly mena sy ny mpitaingina azy ary ny asa nankinin'Andriamanitra taminy. Inona no ambaran'izany fanoritsoritana izany momba ireo mpanara-dia an'i Jesôsy sy ny fitoriana ny filazantsara?Tsarovy fa sary an'ohatra ihany ny hoe soavaly sy Mpitaingin-tsoavaly, izay maneho amintsika ny tantaran'ny Kristianina nanomboka tamin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty hatramin'ny fiaviany fanindroany.
Jereo izay mitranga rehefa mamaha ny tombokase faharoa i Jesôsy: faranan'ilay mitaingina soavaly mena ny fiadanana eto an-tany, ka manjary mifamono ny olona. Inona no nahatonga ny fitsaharan'ny fiadanana? Maneho ny ady ifanaovan'i Jesôsy sy i Satana ilay soavaly mena sy ny mpitaingina azy. Tsy mamono olona tsy akory ilay mpitaingin-tsoavaly. Ilay sabatra lehibe ampiasain'i Jesôsy mba hamelezana an'i Satana kosa anefa dia maneho ny Filazantsara. Miady koa i Satana ho setrin'izany (vakio ny Mat. 10:34), ka amin'ny alalan'ny fanenjehana ny vahoakan'Andriamanitra no amelezany an'i Jesôsy . Izany no mahatonga ilay soavaly faharoa ho mena, izay lokon'ny ra.
Vakio ny Apôk. 6:5,6, izay miresaka momba ny soavaly mainty sy ny mpitaingina azy. Inona no ambaran'io sary an'ohatra io momba ny vahoakan'Andriamanitra sy izay nitranga rehefa nitory ny filazantsara izy ireo? (Vakio koa ny Lev. 26:28 sy ny Ezek. 4:16 ho fanampim-panazavana.)
Mitondra mizana handanjana sakafo ny mpitaingina ilay soavaly mainty. Nisy olona iray nanambara tao amin'ny fahitana azon'i Jaona nanao hoe: "Venty ny vary tritrika eran'ny fatam-bary kely, ary venty koa ny vary hordea intelon'ny fatam-bary" - Apôk. 6:6. Manambara fotoana izay isian'ny tsy fahampian-tsakafo ny filazana fa tsy maintsy mandanja sakafo amin'ny mizana ny olona. Tamin'ny andron'i Jaona, dia denaria iray no karaman'ny olona indray andro (Mat. 20:2). Ampy nividianana ny sakafo nilain'ny fianakaviana tamin'io andro io izany karama indray andro izany. Rehefa nisy tsy fahampian-tsakafo anefa dia tsy afaka nividy afa-tsy sakafo ho an'olona anankiray fotsiny izy ireo. Koa ahoana ary no namahanan'ny fianakaviana iray ny mpianakavy ao aminy? Nividy vary hordea izy ireo. lo no nohanin'ny mahantra satria izany ihany no sakafo tsy mba lafo vidy.
Maneho ny vokatry ny fandavana ny filazantsara ny trangan-javatra amin'ny tombokase fahatelo. Hitantsika fa maneho ny fitoriana ny filazantsara ny soavaly fotsy. Ny soavaly mainty kosa dia sary an'ohatra maneho vanim-potoana izay tsy nisian'ny fitoriana ny filazantsara. Ny vary tritrika sy hordea eto dia maneho ny Tenin'Andriamanitra (Lio. 8:11). Koa rehefa manda ny Tenin'Andriamanitra ny olona dia tsy hahazo sakafo ara-panahy ampy izy ireo ka dia ho noana ny Tenin'Andriamanitra.
Mamaha ny tombokase fahaefatra i Jesôsy (Apok. 6:7,8)
Vakio ny Apok. 6:7,8. Inona no mitranga eto? Ahoana no ifandraisan'izany amin'ny zavatra nitranga tamin'ny namahan'i Jesôsy ny tombokase fahatelo?
Aseho amin'ny voambolana grika hoe "chloros" ny lokon 'ny soavaly ao amin'ny tombokase fahefatra. Ny hoe chloros dia maneho ny loko hatsatra hita eo amin'ny nofo mangatsiaka efa mihalo. Fahafatesana no anaran'ilay mpitaingin-tsoavaly, ary manana namana antsoina hoe Hades izy. Ny hoe Hades dia voambolana grika entina ilazana ny "fasana". Koa asehon'i Jaona amin'ny hoe Fahafatesana sy Fasana, na Hades, ny olona ao amin'ny fahitany. Avelan'Andriamanitra hamono ny olona amin'ny sabatra sy mosary sy fahafatesana ary bibidia izy roa ireo (Mat. 24:7,8).
Fotoan'aretina sy fahafatesana ny tombokase fahefatra. Aseho amin'ireo sary an'ohatra ratsy ireo ny zavatra mitranga rehefa lavin'ny olona ny Tenin'Andriamanitra, izay sakafo ara-panahy avy Aminy. Ho noana fahamarinana ara-panahy ny olona satria tsy nety nihinana ny sakafo tian'Andriamanitra hamahanana azy izy ireo. Aminhy farany dia ho faty ara-panahy izy ireo.
Misy vaovao mahafaly ho antsika anefa, satria noferan'Andriamanitra ho amin'ny ampahefatry ny olona eto an-tany ihany ny fahefan'ny Fahafatesana sy ny Fasana. Manome toky antsika koa i Jesôsy fa manana ny fanalahidin`ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita (Hades, Fasana) Izy (Apôk. 1:18).
Vakio indray ny hafatr'i Jesôsy ho an'ny fiangonana tany Efesôsy sy Sardisy sy Pergamôsy ary Tiatira (Apok. 2). Jereo ny zavatra nitranga tao amin'ireo fiangonana efatra ireo. Ahoana no anehoan'ireo hafatra ireo koa ny zavatra nitranga teo amin'ny tombokase voalohany sy faharoa sy fahatelo ary fahefatra?
Hitantsika tany aloha tany fa manoritsoritra ny zavatra mitranga amin'ny fotoana samihafa eo amin'ny tantaran'ny Kristianina ny tsirairay avy amin'ireo fiangonana fito ireo. Manazava ny zavatra mitranga amin'ny fotoana samihafa eo amin'ny tantaran'ny Kristianina koa ireo tombokase. Nandritra ny vanim-potoan'ny Apôstoly, dia niely haingana nanerana izao tontolo izao ny filazantsara. Nanenjika ny Kristianina ny ampira ramanina taorian'io fotoana io. Asehon'ny tombokase faharoa fa natsahatrAndriamanitra ny fanenjehan'i Roma ny fiangonana, izay nitranga nanomboka tamin'ny fiafaran'ny taonjato voalohany hatramin'ny voalohandohan'ny taonjato fahefatra. Maneho izay nitranga teo anelanelan'ny taona 300 sy 400 TrK kosa ny tombokase fahatelo. Tamin'io fotoana io dia nisy tsy fahampian-.tsakafo ara-panahy na ny Tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiangonana, izay nitarika ho amin'ny fotoana teo amin'ny tantara fantatra tamin'ny hoe "Vanim-potoana Maizina". Ny tombokase fahefatra no manazava tsara ny fahafatesana ara-panahy nitranga teo amin'ny fiangonana kristianina nandritra io Vanim-potoana Maizina io.
Mamaha ny tombokase fahadimy i Jesôsy (Apok. 6:9,10)
Vakio ny Apôk. 6:9,10. Inona no mitranga eto?
Inona no hevitry ny voambolana hoe "fanahy" (Apok. 6:9) ao amin'ny Baiboly? Manondro ny olona iray manontolo izany (Gen. 2:7). Miresaka mamba ireo vahoakan'Andriamanitra nahatoky sy noenjehina noho ny finoany ny Apôk. 6:9,10. Hitan'i Jaona tao amin'ny fahitana "teo ambanininy alitara" tao amin'ny fitoerana masina any an-danitra ireo olona na fanahy ireo (Apok. 6:9). Tao amin'ny fitoerana masina teto an-tany, dia nalain'ny mpisorona ny ran'ny biby nentin'ny olona hatao fanatitra ho an'Andriamanitra. Rehefa izay dia naidiny teo am-bodin'ny alitara ilay ra. Tian'Andriamanitra naseho tamin'i Jaona fa miala sasatra eo ambanin'ny alitara ny vahoakany satria nanolotra ny ainy ho an'ny fahamarinana izy ireo (Eks. 29:12; Lev. 4:7). Niaritra ny tsy rariny sy ny fahafatesana noho ny fahatokiany tamin'ny filazantsara izy ireo. Niantso an'Andriamanitra tamin'ny feo mafy ireo olona ireo, ka nangataka Azy mba hiditra an-tsehatra sy hanome rariny azy ireo.
Misy zavatra ilaintsika apetraka mazava tsara anefa. Milaza ny Baiboly fa tahaka ny torimaso ny fahafatesana, ka tsy miresaka na mifanerasera ny olona rehefa maty. Koa tandindona fotsiny ihany ireo andininy ao amin'ny Apôkalipsy ireo. Manazava ireo zavatra tsy rariny mitranga eto an-tany izany, fa tsy ny zavatra mitranga aorian'ny fahafatesan'ny olona iray velively.
Vakio ny Apôk. 6:11, sy ny Deo. 32:43 ary ny Sal. 79:10. Ahoana no amalian'Andriamanitra ny vavaky ny olony izay maty noho ny finoany sy miantso Azy mafy mba hanome rariny azy ireo?
Omen'Andriamanitra akanjo fotsy lava ireo olo-masina novonoina noho ny finoany. Maneho ny fahamarinan'i Kristy io akanjo fotsy io. Omen'Andriamanitra izay rehetra mandray ny famindrampony sy ny famelan-keloka avy Aminy ary ny fahefana amin'ny fahotana izany (Apôk. 3:5; Apôk. 19:8). Rehefa izay dia nolazain'Andriamanitra taminy fa tsy maintsy miala sasatra izy ireo mandra-pahatanteraky ny mpino hafa eo anatrehan'Andriamanitra, izay handalo izany fanandramana izany koa (Apôk. 7:9 ,10) . Ary amin'ny alalan'ny fahamarinan'i Kristy, fa tsy amin'ny alalan'ny fahamendrehany manokana, no hahatanteraka azy ireo. Tsy hitsangana amin'ny maty ireo maritiora masina ireo raha tsy amin'ny fiavian'i Kristy fanindroany sy amin'ny fiandohan'ny arivo taona any an-danitra miaraka Aminy (Apôk. 20:4).
Raha ara-tantara, dia maneho ny Vanirn-potoana Antenantenany ireo trangan-javatra amin'ny tombokase fahadimy. Olona an-tapitrisa maro no maty maritiora noho ny fahatokiany tarnin'Andriamanitra nandritra io fotoana io. Na izany aza anefa, ireo trangan-javatra ireo koa dia mampahatsiahy ny fanandraman'ireo vahoakan'Andriamanitra nijaly nandritra ny tantara nifandimby, nanomboka tamin'ny andron'i Abela (Gen. 4:10) hatramin'ny fotoana hamalian'Andriamanitra amin'ny farany "ny ran'ny mpanompony" - Apôk.19:2
Mamaha ny tombokase fahenina i Jesôsy (Apok. 6:12-14)
Rehefa mamaha ny tombokase fahadimy i Jesôsy, dia hitantsika fa miantso mafy an'Andriamanitra mba hanome rariny azy ireo ny vahoakan'Andriamanitra izay niaritra fijaliana sy fahafatesana noho ny finoany. Koa tonga ny fotoana hidiran'Andriamanitra an-tsehatra ka hamaliany ny vavaky ny olony.
Vakio ny Mat. 24:29,30 sy ny 2 Tes. 1:7-10. Ahoana no anampian'ireo andininy ireo antsika hahatakatra izay mitranga ao amin'ny Apôk. 6:12-14? Inona no asehon'i Jaona amintsika eto?
Tantarain'i Jaona amintsika eto ireo famantarana miseho eny amin'ny lanitra rehefa vahan'i Jesôsyny tombokase fahenina. Ao amin'ny Mat. 24:29,30 koa dia niresaka momba ireo famantarana ao amin'ny tombokase fahenina i Jesôsy. Hiseho eny amin'ny lanitra amin'ny fiafaran'ny "fahoriana lehibe" Apôk. 7:14, amin'ny Vanim-potoana Antenantenany, ireo famantarana manokana ireo. Mampitandrina ny olona izany fa ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Tena izy ara-bakiteny ny masoandro sy ny volana sy ny kintana miraraka ary ny lanitra resahina ao amin'io tombokase fahenina io. Etsy an-kilany anefa dia milaza koa i Jaona fa ho tonga tahaka ny lamba mainty ilay masoandro ara-bakiteny, mba hanehoana amintsika fa ho tonga tena mainty tokoa ny lanitra. Milaza koa izy fa ho tonga tahaka ny ra ny volana, mba hanehoana amintsika fa ho tonga mena tokoa ny volana. Dia mbola milaza ihany izy fa hiraraka amin'ny tany toy ny aviavy manintsana ny voany manta ireo kintana. Mino ny Kristianina fa efa nitranga avokoa ireo famantarana rehetra ireo: (1) Tamin'ny 1755 dia nisy horohorontany nahatsiravina tany Lisbone, Portugal. (2) Tamin'ny 19 May 1780, dia nahita ny masoandro nivoaramainty tanteraka ny olona tany atsinanan'i New York sy atsimon'i Nouvelle Angleterre. (3) Ary tamin'ny 13 Novambra 1833, dia tonga toy ny andro ny alina rehefa nisy kintana an'arivo niraraka avy tany an-danitra teo amin'ny Ranomasimbe Atlantika. Nitarika ho amin'ny fifohazana maro ny fahitan'ny olona ireo kintana ireo. Raisin'ny Kristianina ankehitriny ho ireo zavatra nolazain'i Jaona fa tsy maintsy hitranga mialoha ny fiavian'i Kristy fanindroany ireo famantarana ireo.
Hanome rariny ny olony i Jesôsy rehefa ho avy. Hatahotra mafy kosa ny ratsy fanahy (Apok. 6:15-17). Hoy izy ireo amin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: "Mianjerd aminay, ka afeno izahay (...) amin'ny fahatezeran'ny Zanak'ondry" - and. 16. Hoy koa ireo olona feno tahotra ireo: "Tonga ny andro lehiben'ny fahatezeran'ireo, ka iza no mahajanona?" and. 17. Omen'i Jaona ao amin'ny Apok. 7:4 ny valin'io fanontaniana io: ireo manana ny tombokasen'Andriamanitra eo amin'ny handriny no hahajanona amin'izany andro izany. Midika izany fa feno ny Fanahy Masina ireo vahoakan'Andriamanitra ireo.
Vakio ny Ellen G. White, "The World's Need," It 457-460, ao amin'ny TMGW.
Maneho ara-tandindona ny fahitana momba ny famahan'i Jesôsy ireo tombokase fito fa miahy ny olony eto an-tany Andriamanitra. Tahaka izao no nilazan'i Kenneth A. Strand izany:
"Misy toky ao amin'ny Baiboly fa niahy mandrakariva ny olony Andriamanitra. Asehon'ny Baiboly koa fa teo mandrakariva lzy mba hanohana azy ireo nandritra ny tantara nifandimby. Mampanantena koa ny Baiboly fa amin'ny andro farany, dia hanome rariny ny olony Andriamanitra, ary hamaly soa azy ireo amin'ny fiainana mandrakizay. Fanomezana sarobidy tokoa izany. Bitika ihany no fantatsika momba ny hasarobidin'izany fanomezana izany ho antsika.
"Miresaka momba ny fiahian'Andriamanitra ny olony koa i Jaona ao amin'ny bokin'ny Apôkalipsy, ary mitantara misimisy kokoa momba ny fitiavan'Andriamanitra antsika aza. Koa marnpita ny votoatin'ny hafatra manan-danja indrindra ao amin'ny Baiboly iray manontolo izany: i Jesosy "Ilay velona", Ilay nandresy ny fahafatesana sy ny fasana (Apok. 1:8). Tsy hahafoy na oviana na oviana ireo mpanara-dia Azy mahatoky Izy, ka hivoaka mpandresy hatrany izy ireo na dia tsy maintsy ho faty maritiora aza (Apôk. 12:11). Miandry azy ireo ny "satroboninahitra fiainana" (vakio ny Apôk. 2:10; Apôk. 21:1-4; Apôk. 22:4)." — Kenneth A. Strand, "The Seven Heads: Do They Represent Roman Emperors?" ao amin'ny Symposium on Revelation—Book 2, Daniel and Revelation Committee Series (Silver Spring, Md.: Biblical Research Institute, 1992), b. 7, t. 206.
1. lnona no lesona sarobidy nianaranao avy amin'ny lesontsika momba an'i Jesôsy sy ireo tombokase fito? Ahoana no anehoan'ny famahan'i Jesôsy ireo tombokase ireo to mbola nnifehy ny zava-drehetra Andriamanitra, na ratsy manao ahoana aza ny zavatra mitranga eto an-tany? Ahoana koa no anehoan'izany fa ho tanteraka avokoa ny teny fikasana rehetra ananantsika ao amin'i Kristy?
2. Diniho ity fanambarana manarakin ity: "Ny fiangonana no fitaovana notendren'Andriamanitra hilaza ny famonjena amin'ny olona. Nalamina ho amin`ny fanompoana izy, ary ny hitondra ny filazantsara ho an'izao tontolo izao no asa nanirahana azy" - VM, t. 11. Eritrereto ny fiangonanao. Ahoana no hananany fahatokiana misimisy kokoa mba hanatrarany olona maro amin'ny hafatry ny filazantsara?